Thai Nepal News:: मातृभूमिलार्इ अत्यन्तै माया गर्ने सामाजिक अभियनता अकल थापा मगर ज्यूको समृद्ध नेपालको सपना कस्तो छ त ?
मातृभूमिलार्इ अत्यन्तै माया गर्ने सामाजिक अभियनता अकल थापा मगर ज्यूको समृद्ध नेपालको सपना कस्तो छ त ?
शुक्रबार, श्रावण-०७, २०७३
यसैक्रममा राष्ट्रलाई अत्यन्तै माया गर्ने मातृभूमिका लागि युवा अभियान थाइल्याण्डका अध्यक्ष श्री अकल थापा मगर ज्यूसँग गरीएको महत्वपुर्ण कुराकानी ;
१. नेपाली युवाहरुलाई कस्तो नेताको आवश्यक छ ?
– नेपालमा युवाहरुको भावना र बिचारलाई कदर गर्दै नयॉ दिशा र मार्गदर्शन गर्न सक्ने नेताको आवश्यक छ । देशभक्ति र मातृभूमिप्रति माया गर्ने नेताको आवश्यक छ ।
२. नेपाली युवाहरुका लागि अब कस्तो पार्टीको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ ?
– नेपालको यति खेरको राजनैतिक पार्टी र क्रियाकलाप भनेको व्यक्तिगत स्वार्थको लागी खेलिने Platform भएको छ । बैचारिक सिद्दान्तलार्इ अंगाल्न सकेको छैन । इतिहासले जे बनाउन खोजिएको थियो देशलाई, त्यसको उल्टो खेल भएको छ । त्यसैले देशको आवश्यकता के हो ? र मातृभूमिले के खोजेको छ ? भन्ने कुराको मुल्याङ्कन कसैले गर्न सकेनन् । युवाहरुलाई राजनैतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गरिदैँछ । त्यसैले आजको युवाहरुको लागी आवश्यक राजनैतिक पार्टी भनेको देशको विकासमुखि कार्यको लागी मार्गदर्शन गर्न सक्ने नेता र पार्टीको आवश्यक छ ।
– राजनैतिक अस्थिरता
– असक्षम नेतृत्व
– कर्मचारीतन्त्रको हालिमुहाली
– भ्रष्टचारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु
– सहयोगी दाताको मुख ताकेर बस्नु
– युवा शक्तिलाई प्रयोग गर्न नसक्नु
४. तपाइको विचारमा नेपालको विकासका लागि कुन सिद्दान्त आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
– नेपालको बिकासको लागी कुरा गर्नु पर्दा धेरै नेताहरुले सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड सपना देखाए तर काठमाडौँको झींगा धपाउन सकेनन् । नेतृत्व र पदको लागी खिचातानीमा नै समय खेर फाले । देशले चाहेको बिकासको सिद्दान्त भनेको आफ्नो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति र मौलिकता सुहाउँदो सिद्दान्तलार्इ अवलम्वन गर्न सक्नु पर्छ । बिदेशीको नक्कल गरेर आफ्नो क्षमतालाई मुल्याङ्कन गर्न नसक्दा देशमा सबै बिकासको कुराहरु काल्पनिकमा मात्रै सिमित भएका छन् ।
– शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने ।
– युवाशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्वदेशमा नै लगानी गर्ने, गराउने ।
– दीर्घकालीन बिकास परियोजना मार्फ़त युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने ।
– आर्थिक श्रोतको पहिचान गर्ने ।
– जनताको मुलभुत आवश्यकतालाई पहिचान गरि परिपुर्तीको लागी पहल गर्ने ।
आदि कामहरु गर्नेछु ।
६. तपाई कुनै पार्टीको कार्यकर्ता अथवा नेता नभई एउटा नागरिकको हैसियतमा देशको सम्वृद्धिको लागि गर्नु भएको कुनै योगदानको वारेमा बताइदिनु हुन्छ कि ?
– स्वतन्त्र नागरिक भएर होस या कुनै पनि राजनैतिक पार्टी प्रति आबद्द भएर होस, आखिर देशको सम्वृद्धिको लागी त उदेश्य उस्तै हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुँ । कुनै असल कुरा देखेँ भने त्यसको support गर्छु र केही देश र जनताको लागी ख़राब देखेँ भने त्यस्को बिरोध गर्छु । बिद्यार्थीकालमा पंचायती व्यवस्था ख़राब देखेँ त्यसको बिरुद्दमा लडेको थिएँ । प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो र लोकतन्त्र पनि आयो तर जुन बिद्यार्थीकालमा पंचायती व्यवस्थाको बिरुद्दमा लड्दा कल्पना गरिएको जस्तो प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएन, फरक किसिमको आयो । बिडम्बनाको कुरा यहि हो ।
मेरो योगदानको कुरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्म देशको लागी मैले केहि पनि दिन सकेको छैन । म स्वार्थी भएँ तर म जस्तो स्वार्थी नहोउ भन्दै बिदेशमा रहनु भएका युवाहरुलाई देश फर्काउने अभियानमा सक्रिया हुँदैछु जो मातृभुमीका लागी युवा अभियान मार्फत । मातृभुमीमा रहँदा सानातिना समाज परिवर्तन, बिकृती हटाउने र गाऊँ बिकासको कुराहरु गरेँ होला तर ती अति सुष्म कुराहरु हुन समग्र देशको लागी । समग्र रुपमा सम्वृद्धिको लागी सचेत नागरिकको भुमिका निर्वाह गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । धन्यबाद !